ငါ့ခွေးကလေးကငါ့ကိုကိုက်နေရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ | Dogs World
လူသားများနှင့်ခွေးများသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်နှစ်ခုဖြစ်ပြီးထောင်စုနှစ်နှင့်ချီ။ တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး သိကျွမ်းခဲ့ကြရာကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သတ်၍ ဒဏ္myာရီပုံပြင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ mascotasမကြာခဏကြီးမားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူစေကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်သော မှားတယ် တိရိစ္ဆာန်အချို့အပြုအမူများသို့မဟုတ်အပြုအမူများအကြောင်း။
3.1 နှုတ်ဆက်သွယ်ရေး + ဆက်သွယ်ခြင်းပြသခြင်း
ငါတို့ရှိသမျှသည်စိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့ ခွေး၏ဘဝ၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်အလွန်အရေးကြီးလှသည် သူ၏အသက်တာ၏ကျန်၌တည်၏။ ငါပြီးသားသူတို့ဘယ်လို, ယခင်ပို့စ်များတွင်အကြောင်းပြောခဲ့တယ် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - ခွေးပေါက်စများ၌စိတ်ဖိစီးမှု - ၁ y စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာသင်ယူခြင်း၊ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုနက်နက်နဲနဲဖော်ပြရန်၊ အာရုံအနည်းငယ်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပိုမိုတိကျပြီးအသုံး ၀ င်သောအသံများကိုပေးမည်။ ခွေးတွင်အလွန်အသုံးများသောအပြုအမူကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် ခွေးကလေးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာ။
လူသားများကဲ့သို့ခွေးများ, သူတို့ကလူမှုရေးတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသည်နှင့် သူတို့ရဲ့မျိုးစိတ်အခြားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အတူအပြန်အလှန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးကိုတက်စေသောကျွမ်းကျင်မှု5နှင့်အတူ။ ခွေးငယ်လေးများဖြစ်သောကြောင့်မိခင်၏ခွေးများဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ပေးသောကြောင့်ခွေးကလေးသည်အခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်သောကိရိယာများကိုရရှိသည်။
မိခင်ဖြစ်သူကသူတို့ကိုဖွံ့ဖြိုးမှု၏အစောဆုံးအဆင့်များမှ စတင်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အဆင့် မှစ၍ စတင်ခဲ့သည်။ သန္ဓေသား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဗီဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုမှသည်မိခင်ဟော်မုန်းအဆင့်အထိလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်သြဇာသက်ရောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မိခင်များသည်မွေးကင်းစအဆင့်သို့ရောက်သောအခါမိခင်သည် perianal lavage မှတဆင့်ဆီးသွားခြင်းနှင့်အရေဖျားလှီးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်။ သင့်ရဲ့ခွေး၏ပညာရေးအတွက်အများဆုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဆင့်ဖြစ်ပျက်သောလူမှုရေး,, အမှိုက်သရိုက်အတွက်အခြားခွေးပေါက်စနှင့်အတူအပြန်အလှန်အများဆုံးအပြင်းအထန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဂိမ်းပိုမိုပြင်းထန်သောနေရာဖြစ်သည်ကတည်းက, လူမှုရေးအဆင့်မှာကွဲပြားခြားနားသောအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်စတင်, ထို့ကြောင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်။
ဤရွေ့ကားလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများသောအားဖြင့်ထူထောင်နေကြသည် ပတ်ပတ်လည် 4-6 ပတ်ကြာပြီးနောက်။
ခေါ်ဆိုမှုထဲမှာ လူမှုရေးအဆင့်, သူတို့ရဲ့လူမှုရေးသင်ယူမှု agonistic အပြုအမူ၏လယ်ကွင်းမှ (က ethology အတွက်လူသိများသည်အတိုင်းအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောလူမှုရေးအပြုအမူအထိ), သူတို့ရဲ့အပြုအမူပုံစံများ, ရန်လိုအပြုအမူ, ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု, တင်သွင်းသူများ၏ရန်, ရှုထောင့်အားလုံး၌၎င်းတို့၏လူမှုရေးသင်ယူမှုစတင် လူမှုရေးလွှမ်းမိုးမှုတိုတိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်။ အခြားသူများလည်းမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နွားစုအတွင်းဖွဲ့စည်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမဲလိုက်ခြင်းပုံစံများ၊ ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင်ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်နယ်မြေပိုင်နက်အယူအဆ။
ဒီအဆင့်မှာကစတင်ခဲ့သည် အခြားမျိုးစိတ်နှင့်အတူလူမှုရေးဆက်ဆံရေးကိုမြဲမြံစေလူအပါအဝင် အချိန်ကာလသည်သင်အလွန်သတိထားရမည့်အချိန်ဖြစ်ပြီးသူတို့သည်လွယ်လွယ်ကူကူစွဲမှတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခွေးသည်၎င်း၏အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အဆင့် ၇ ဆင့်ကိုကောင်းစွာခွဲခြားထားသည့်အဆင့်များခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤအဆင့်များမှာ
မွေးကင်းစ (0 မှ2ပတ်မှ) ။
အသွင်ကူးပြောင်းရေး (2 မှ3ပတ်မှ) ။
လူမှုရေး (3 မှ 12 ပတ်မှ) ။
လူငယ် (၃ လမှ ၈ လအထိ) ။
အရွယ်ရောက်သူ (၃ လမှ ၈ လအထိ) ။
ရင့်ကျက်မှု (1 မှ2နှစ်အထိ) ။
နှုတ်ဆက်သွယ်ရေး + ဆက်သွယ်ခြင်းပြသခြင်း
ငါအမှုသည်တစ်ယောက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါများသောအားဖြင့်သူတို့ခွေးထံမှဘာလိုအပ်သည်ကိုနားလည်ရန်လိုသည် ခွေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုအပြုအမူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါသဘာဝမဟုတ်သောအရာဖြစ်သော။ ထို့အပြင်များသောအားဖြင့်တော့မလွယ်ကူလှပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလေးချောင်းရှိသောမိတ်ဆွေများနှင့်ပြhaveနာအများစုမှာရှင်းပြရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောကိစ္စမှဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူကွဲပြားသောမျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။
ခွေးများသည် canids များဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် hominids များဖြစ်ကြသည်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပုံသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်၊ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်မျိုးစိတ်များ၏မူလအစဖြစ်သည်။ မလိုအပ်သောနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း.
သငျသညျအကြှနျုပျ၏အမြင်၌ဤအကဲဖြတ်ရန်ကြွလာသောအခါအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောရှုထောင့်ကိုသိရန်ရှိသည် ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ခြားနားချက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ်နှစ်ခုအကြား: လူ့နှင့်ခွေး။
လူသားများကသတင်းအချက်အလက်များကိုသူနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လိုပါကအခြားသူတစ် ဦး ဦး ထံပေးပို့သည့်သတင်းစကားတွင်သယ်ဆောင်ထားသည်။ နှုတ်နှင့်အခြားအမူအရာ။ တစ်စုံတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ရာကိုဖော်ပြလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုမက်ဆေ့ခ်ျ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုနှုတ်ဖြင့်ရှုထောင့်တွင် ၄၀% နှင့်အမူအရာရှုထောင့်တွင် ၆၀% ကိုအပ်နှံလေ့ရှိသည်။
ခွေးကဒီရှုထောင့်၌အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်သတင်းအချက်အလက်များ၏ 99% သည်၎င်း၏ gestural ရှုထောင့်နှင့်နှုတ်ဖြင့်လယ်ပြင်၌သာ 1% မက်ဆေ့ခ်ျကိုအတွင်းမှာအပ်သည်ကတည်းက။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သက်ရှိရှင်သန်မှုအတွက်ဖြစ်ပြီး၎င်းအားရန်လိုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အန္တရာယ်များကိုပိုမိုအလိုလိုသိသောနည်းလမ်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုသည်။
လူသားများတွင်အမြဲ prima သင်အမူအရာလေယာဉ်မှတဆင့်သင်ပေးပို့သတင်းအချက်အလက်ဤကိစ္စသည်များသောအားဖြင့်သတင်းစကား၏နှုတ်ရှုထောင့်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - သင်ကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူအခန်းတစ်ခန်းတွင်နွေရာသီဖြစ်သည်။ အလွန်ပူသည်။ လေအေးပေးစက်ကိုပါဝါအပြည့်ဖြင့်ဖွင့်သည်။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးသူမကိုယ်ကိုပွေ့ဖက်ကာသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အပူတိုးပွားစေရန်မိမိကိုယ်ကိုပွတ်တိုက်နေသည်။ သငျသညျသူမ၏ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မေးခြင်း, သင်အအေးလားထိုအခါသူမအဘယ်သူမျှမကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမအတူတူပင်လက်ဟန်ခြေဟန်လုပ်နေတယ် ... သင်ယုံပါ့မလား ဒါမှမဟုတ်အေးအေးဆေးဆေးကိုယ်ဟန်အမူအရာကသူပြောတာထက်သင့်အတွက်ပိုအရေးကြီးသလား။
ကောင်းပြီ၊ ခွေးတစ်ကောင်ကဒီလိုမျိုးမပြောနိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွေးဟာအအေးမိခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာသတင်းစကားရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) အရည်အချင်းမရှိခြင်းတို့မရှိဘဲတုန်လှုပ်ခြင်းအမူအယာနဲ့တိုက်ရိုက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။
လူသားတွေအတွက်၊ ထိတွေ့မှုဆိုတာအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သည့်မော်ကွန်းတစ်ခုသာမကအဓိကမနုomorဗေဒဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်များပေးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်ပေါ်ရှိကမ္ဘာကြီးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပါအခြားလူများနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုထိပါ၊ ကိရိယာများ၊ အရာဝတ္ထုများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်၊ ခံစားချက်နှင့်ခံစားချက်များကိုဖော်ပြပါ၊ ကာကွယ်သည်၊ တိုက်ခိုက်သည်နှင့်ရှည်လျားသောအရာများ။
ထိတွေ့မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကများသောအားဖြင့်၎င်းကိုလက်များဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ပြီးလူသားများအနေဖြင့်အရာများကိုထိတွေ့မှုဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပုံမှန်ဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ နား၊ လျှာနှင့်အလားတူအဆင့်အတန်းရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရယူသည်။
သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည် Tomás Ortiz Alonso၊ ပါမောက္ခ - ဒါရိုက်တာ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာဌာန။ မက်ဒီဒူတက္ကသိုလ်၊
မိခင်၏အသားအရေနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်ကလေးငယ်သည်သူမတုန်ခါမှုကိုဖမ်းယူကာသူမပေးသောခံစားချက်များကိုခံစားသည်။ ဘ ၀ ၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ရက်များတွင်မိခင်များနှင့်ဖခင်များသည်ကလေး၏ပါးကိုသို့မဟုတ်လက်ကိုထိုးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏ကလေးကိုသိနိုင်သည်။ ဘဝ၏ပထမ ဦး ဆုံးကာလများတွင်ထိတွေ့မှုသည်ကလေးနှင့်ကလေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မိဘများသည်ကလေးများအားမွေးဖွားခြင်းမှထိတွေ့နိုင်သောခံစားလွယ်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သည်။ ။
Tactile sensitivity သည်ကလေး၏ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုတိုးစေသည်။ အမှန်မှာ၊ ကလေးငယ်များနှင့်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောခြင်္သေ့များကကလေးများကိုပြုံးစေပြီးအရွယ်ရောက်သူ၏မျက်နှာကို ပို၍ ဂရုပြုစေသည်။ ကလေးများသည်အရာဝတ္ထုများကိုကောက်ယူနိုင်သဖြင့်ထိတွေ့မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည့်ကြားခံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးထဲတွင်လူ့လက်နှင့်တူသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းသည်ပါးစပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လူသားတို့လက်နှင့်လုပ်သောအရာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သူတို့ကသူတို့နှင့်အတူဆော့ကစားသည်၊ လျက်လျက်၊ လျှက်လျက်၊ caress လုပ်သည်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ကြသည်၊ သူတို့၏ခံစားချက်နှင့်ခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်၊ အရာရာကိုဖမ်းဆုပ်သည်၊ ချွေးများ (ခန္ဓာကိုယ်မှအပူထုတ်လွှတ်သည်) နှင့်၊ ငါတို့ခွေး၏ပါးစပ်သည်သူ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ငါတို့လက်များနှင့်တန်းတူသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသည်။ ၎င်းကိုမြေပုံဆွဲသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ခွေး၏ထိတွေ့မှုသဘောအားလုံးသည်ပါးစပ်သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတွင်လည်းထိုခံစားချက်ပေါ်ပေါက်လာသည် ခြေ, ကျောရိုးနှင့်အမြီး pads.
ထိတွေ့မှု ခွေးတွေမွေးလာတာကပထမဆုံးခံစားချက်ပါ, ၎င်းသည်၎င်းတို့အားသူတို့၏မိခင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်မွေးကင်းစကလေးအဆင့်မှသူထံမှလှုံ့ဆော်မှုကိုခံရန်သူတို့ကိုကူညီသည်။ အမေ လှုံ့ဆော်လိမ့်မယ် ခွေးကလေးသည်မွေးပြီးမကြာမီတွင်၊
ထို့ကြောင့်စတင်ခဲ့သည် ယင်း၏မိခင်နှင့်အဆက်အသွယ်မှတဆင့်ခွေးလူမှုရေး နှင့်သူ၏အစ်ကိုများ, မှန်ကန်သောတိုးတက်မှုနှင့်မှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သူ၏စရိုက်လက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းအဆက်အသွယ်။
ခွေးများနှင့်လူသားများတွင်မိခင်များ၏ချစ်ခင်တွယ်တာမှုလိုအပ်ချက်ကိုကောင်းစွာပြသသောရောဂါတစ်ခုရှိသည် စိတ်ခံစားမှု Marasmus။ ဤရောဂါသည်ကလေး (သို့) ခွေးပေါက်စနှင့်၎င်း၏မိခင်နှင့်အဆက်အသွယ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါဒီမှာသတင်းစာဆရာတစ် ဦး ရှင်းပြချက်ကိုသင်ထားခဲ့ပါ မာရီယာဗစ်တိုးရီးယား Masiရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေတယ်၊
အဆိုပါ Marasmus, ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုဆက်နွယ်မှုကိုမတည်ဆောက်နိုင်သည့်ကလေးများအားအကျိုးသက်ရောက်စေသောချို့တဲ့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အချိန်မီမယူပါက (မိခင်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း) ကလေးသည်သေဆုံးသွားသည်။ သူသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယိုယွင်းပျက်စီးမှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိပြီးကလေးငယ်သည်မိမိ၏ရန်လိုမှုအားလုံးကိုမိမိကိုယ်ကိုထည့်သွင်း။ နေရာမပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အပြင်ဘက်
သင့်ခွေးကလေးခွေးကိုက်လိုက်တာဟာအစကတည်းကရောဂါဗေဒဒါမှမဟုတ်ထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူမျိုးမဟုတ်ပါ၊ ငါတို့ခွေးကသူ့ပါးစပ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာတတ်လာတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သင်ယူမှုသံသရာအတွင်းမှာသဘာဝပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်, ကိုက်၏သက်ရောက်မှုငါတို့အဘို့ကဲ့သို့တူညီသောမရှိကြပေ။
လူ့ဆက်ဆံရေးလောကမှာ၊ ကိုက်ရန် ဒါဟာစိတ်အားထက်သန်မှုများစွာကိုဆိုလိုတာပါ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဖော်ပြသည့်အခါ၎င်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါစေ။ ဤယူဆချက်သည်ကိုက်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအလွန်ပြင်းထန်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အားမြင်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ရရှိကြသည်။ သွားများသည်အာရုံကြောအမျှင်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အာရုံကြောကွန်ယက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, အရာကသူတို့ကိုနီးကပ်စွာဆက်စပ်စေသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှု.
ခွေးတစ်ကောင်အနေနှင့်ခွေးသည်ကမ္ဘာကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ အခြားသူများနှင့်ပေါင်းသင်းရန်နှင့်ဆက်စပ်ရန်ကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းတွင်ခွေးသည်သူ၏ပါးစပ်နှင့်သွားများကို အသုံးပြု၍ သင့်ကိုကိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏မိခင်၊ ညီများသို့မဟုတ်သင့်ကို ဦး တည်သူနှင့်အတူစည်းလုံးမှုကိုခံစားရရန်ကြိုးစားသည်၊ ၎င်းသည်သူ၏အဆင့်တွင်သူအသုံးပြုနိုင်သည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဟာဖြူစင်ဖြူစင်ခြင်းအတွက်အရင်းနှီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးဘာမှမရှိဘူး
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူသည် Y ငါ့ကိုကိုက်ရင်ကိုက်ရင်အန်တိုနီယို?
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကလေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်မှုကိုပြရန်သူ၏နှုတ်ဖြင့်ချော့ခြင်း၊ ငါတို့ကိုနာတယ် အဲဒါအရမ်းရှင်းပါတယ်
ခွေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုပါးစပ်နဲ့နှိမ့်ချတယ်၊ ငါတို့ကိုလတ်တယ်၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့နည်းနဲ့ကစားတာ၊ ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်ခြင်းမရှိဘဲငါတို့သွားတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုမရှိဘဲခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ကိုက်ပြင်းထန်မှုသည်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ် ငါတို့ခံချင်တယ်။
ခွေးကအမေဒါမှမဟုတ်မောင်နှမတွေကိုကိုက်တဲ့အခါ ကန့်သတ်စူးစမ်းဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှိလျှင်, ထိုအုပ်စုအတွင်းတည်ဆဲ။ ခွေးတစ်ကောင်ကသူ့အမေကိုခက်ခက်ခဲခဲကိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကဒေါသဖြင့်ကျူးကျော် ၀ င်လာပြီးသူ့ကိုခွေးကလေးကနားလည်မှုအကန့်အသတ်ဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်း၊ ဘယ်ဟာ၏ပြင်းထန်မှုကိုလူမှုရေးအရလက်ခံသည်၊ ဒါကနည်းလမ်းတစ်ခုပါ အဆင့်.
ဒီခွေးကလေးကသူ့အစ်ကိုတွေကိုကိုက်ပြီးနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့အခါသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသူတို့နဲ့ကစားတာကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးဘယ်လှုပ်ရှားမှုမှာမဆိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းခံရတဲ့သဘာဝစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြင့်ကျူးကျော်မှုကိုပြန်လာကြပါတယ်။ ခွေးကလေးသည်ခွန်အားကိုထိန်းညှိရန်သင်ယူရမည် အုပ်စုကလက်ခံခံရဖို့ခံစားမိနိုင်ရန်အတွက်သူ၏ကိုက်၏, ၎င်းသည်လူမှုရေးတိရိစ္ဆာန်များအနေဖြင့်ခွေးများ၏အကြီးမားဆုံးသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ခံထားပြီးအုပ်စုထဲ၌ပေါင်းစည်းသည်ဟုခံစားရရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်အလွန်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်သည်။ မည်သည့်အလွှာမျိုးတွင်မဆိုအုပ်စုနှင့်ရပ်ရွာအတွက်ရန်လိုသူများအားလူမှုရေးအရသီးခြားခွဲထုတ်သည် လူမှုစီးပွားရေး - ယဉ်ကျေးမှု။ ရုံးထဲမှာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာလား။
ငါတို့ခွေးခွေးကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အခါငါအရင်ကရှင်းပြခဲ့သလိုပဲသူမအမေနဲ့အမှိုက်သရိုက်တစ်ခုခုမှာငါတို့ကဲ့သို့ပြုမူလိမ့်မည်။ ကြောင်းကြားဆက်ဆံရေးအတွင်းမှာအရာအတွက်အပြန်အလှန်ဖြစ်လိမ့်မည် ကျနော်တို့ကန့်သတ်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာဆုံးဖြတ်ရပေမည် အကြမ်းဖက်မှုများမပါဘဲဖိနှိပ်ခြင်းမခံရပဲမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်ကိုသိပြီးအမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်သည်။ လက်တလောပြtheနာကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ ခွေးကိုကိုက်သည့်အရာနှင့်အညီကန့်သတ်ခြင်းသည်တိရစ္ဆာန်၏ပညာရေးအတွက်ယုတ္တိရှိပြီးအလွန်လိုအပ်သည်၊
ဒီလိုလုပ်ဖို့, ငါတို့ကသူ့ကိုတားဆီးဖို့ကလေးဘဝကတည်းကသင်ပေးရမယ်၊ ဤနည်းအားဖြင့်အနာဂတ်ပြproblemsနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ခွေးတစ်ကောင်သည်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည့်အခါ၎င်း၏ကိုက်ခြင်းကိုတားဆီးရန်ခွေးကိုပညာပေးခြင်းသည်လွယ်ကူသည်။
သူနှင့်ကစားသောအခါသူ၏သွားများကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိအားပေးသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်ငါတို့သည်ခိုင်မာအားကြီးသည်ဟုဆိုရမည်၊ ဝေးဆွဲထိုသို့လျစ်လျူရှု. ၎င်းသည်သင်၏အမေကသင့်အတွက်ကန့်သတ်ချက်သတ်မှတ်သည့်အချိန်နှင့်ညီမျှသည်။
သင့်ရဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာတစ်နှစ်အသက်ကြီးပြီးလက်၊ ခြေထောက်ဒါမှမဟုတ်အားကြီးတဲ့အဝတ်ကိုကိုက်ရင်၊ သင်တစ် ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုသွားရပေမည် ခွေးတစ်ကောင်ကိုသင်ကြားရေးမှာ၊ လိုအပ်ရင်သူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုနားလည်အောင်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးမှာပါ။
ခွေးသည်စားရန်သို့မဟုတ်ကိုက်စားရန်ထက်ပါးစပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာငါတို့နဲ့ပညာရေးပေါ်မှာမူတည်တယ် အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ရန်လိုခြင်းမရှိဘဲကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကလေးသည်သူ၏နှုတ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ ငါ့ကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကဤဆောင်းပါး၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » လေ့ကျင့်ရေး » ငါ့ခွေးကလေးကငါ့ကိုကိုက်နေရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
ဘရပ်ဆဲလ် Griffon ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများ